Blake Lively waa actress iyo actor Maraykan ah. Waxay ku dhalatay California bishii Agoosto 25, 1987 iyaga oo ah qoyska hal-abuurka ah, oo horey u lahaa afar caruur ah. Laga soo bilaabo caruurnimada, yar yar ee Blake, oo ay la socdaan waalidkeed, waxay kaqeyb qaadanayeen casharo iyo goobo firfircoon.
Blake wuxuu ku soo bandhigay filimooyin badan, laakiin ugu caansan wuxuu ahaa gabar yar oo lagu magacaabo "Gossip Girl", oo ay ka muuqatay kaalinta Serena van der Woodsen - gabar qani ah oo hodan ah. Haweeneydan ayaa aheyd gabadhii ugu da'da yareyd ee loo yaqaan 'Blake Lively', oo ay ku jirto liiska dumarka ugu galmoodka ah (sida laga soo xigtay natiijada sahanka goobta). Leonardo di Caprio. Sidaa darteed, ka dib markii taxane ah "gossip Girl" waxay bilaabatay inay u soo jeestaan ​​Blake Lively gabadha caadiga ah ee caadiga ah ee quruxdeeda qurux badan leh iyo riyada ragga oo dhan.
Nooca Blake Lively waxay la mid tahay qaabka dabeecadeeda Serena van der Woodsen - sawir dhalinyaro ah oo dhalaalaya oo dhalaalaya. Aktarka ayaa jecel alaabooyinka qaaliga ah, ugu jecel yahay Chanel. Blake wuxuu leeyahay muuqaal aad u caan ah, muuqaal qurux badan, taas oo laga xishoodi karo. Nabaro indho buluug ah, cagaha dhegaha iyo dhoola cadeyn. Iyada oo kor u kac ah 178 sentimitir, xuduudaheeda waa 82-60-90.
Blake Lively, sida heroine, ayaa jecel inay xirato dhar noocyo kala duwan ah iyo midabo. Sawirka filimka 'actress' ayaa lagu soo bandhigay dhaqdhaqaaqyada xirfadlayaasha ee qaababka 'stylists'. Waqti ka dib, Blake waxay barteen in ay doortaan qalabkooda gaarka ah waxayna ku daraan qalabyo. Blake Lively's gardarrada oo dhan ayaa jecel isha waxayna muujisaa shakhsi dhalaalaya, silhouette sexy iyo moodleed.
Xitaa dharka arooska ee Blake Lively iyo arooska arooska leh ee Rain Reynolds ayaa si aad ah looga hadli jiray bandhigyo kala duwan. Kadib, waxay u muuqatay qof walba in qurux guban uu jebin karo wadnaha in ka badan hal nin. Qaar badan ayaa aad uga walwalsanaa dharkii saxda ahaa ee uu dhameestiray. Ilo kala duwan ayaa jira kala-duwanaansho. Munaasabadda Martha Stewart ayaa faahfaahisay munaasabadda iyo xafladda, iyada oo sheegtay in aroosadda ay xiran tahay dharka waddanka, oo loo diyaariyay inay amar u siiso saaxiibkeeda Georgina Chapman, iyada oo lugaha raaxada leh ka soo qaadatay Christian Louboutin lugaha. Aroosadda iyo arooska ayaa labisan dharka Burberry.
Xayawaanka Dheerka ah
Dharka gabadha jilicsani waa mid cajiib ah: tiro badan oo ka mid ah rukummada oo kaliya ku loolamaya dharka. Blake Lively wuxuu leeyahay kabo badan oo kabaha: laga bilaabo kabo casri ah iyo kabo caan ah si ay u socdaan, kabo casri ah iyo kabaha canqawga ah in actresska jecel yahay wax badan. Blake Lively inta badan waxay u egtahay mid la mid ah sida halyeeygeeda Serena, dharka gaaban ama dhirta, iyaga oo isku daraya iftiin, jilicsanaan jilicsan. Nolol-maalmeedka, dhar-guluubka tusaaluhu wuxuu ka kooban yahay T-shaati, T-shaati, jeexan raaxo leh, dhererka dhererka kala duwan, surwaal oo laga jaray qaybta. Dib-u-qabashada iyo shirarka qarsoodiga ah, Blake waxay marwalba u muuqataa mid aan la adkeyn karin. Dharka oo ka soo jeeda qaali qaali ah iyo naqshadeeyayaasha caan ah ayaa si qoto dheer u muujinaysa waxkasta oo ka mid ah shaxdeeda: xabadka cufan ee quruxda badan, lugaha dhaadheer, calaamad adag iyo gadaal qurux badan.
Qaadashada Blake Lively ayaa si isdabajoog ah u badashay. Hada halkii laga heli lahaa podvodki madow iyo dhalaalaya dhalaalaya gabadhu waxay u gudubtay dhawaaqyada iftiinka. Sida caadiga ah, kuwani waa hooskii dahabiga ah, oo aad u qurux badan oo ay la socdaan tan tayo wanaagsan oo ah actress. Blake Lively inta badan waxay isticmaashaa naqshad casaan ah. In qurxiyo caadiga ah ee xiddig, waxaad xoogga saari kartaa minimalism ee midabyada la xiriira dabiiciga ah, quruxda dabiiciga ah.
Maqaarka Blake Lively
Isagoo ka hadlaya timaha Blake, mid waa inuu xusuusnaado aristiska iyo saxnaanta wejigeeda, taas oo ay ugu wacan tahay timaha jilicsan u muuqda mid weyn oo la ururiyey, oo la kala diro, iyo qaabeynta, iyo xataa xitaa wax yar oo aan cidhiidhi ahayn. In filimka "Gossip Girl" timaha Blake ayaa si joogto ah u wareegay curry, sidaas awgeed timuhu waxay ahaayeen kuwo dumar ah. Kadib filimkii ugu horreeyay ee filimka, gabdho badan ayaa bilaabay inay jilaan galiyaan jilitaanka actorka, isla mar ahaantaasna timo madow oo aan la ilaawin ayaa bilaabay inay ka muuqdaan dhacdooyin qarsoodi ah.
Blake Lively waa actor caadi ah oo hibo leh waqtiyo casri ah. Waxay kaligeed kudooneysaa in ay ku faraxsantahay nolosheeda qoyskeeda, nasiib wacan iyo guusha cusub ee hawlaheeda xirfadeed.
Tsvetotip "guga" - caanka
Sawirka cusub ee Miley Cyrus
Dhar for the Festival Cannes 2015
Qaadashada Vera Brezhneva
Margot Robbie iyada oo aan qurxiyo
Britney Spears qurxiyo
Volochkova iyada oo aan la samayn
Sawirka sawirka Erika Herceg ee Maxim magazine
Angelina Jolie siraha muuqaalka
Guuleystayaasha Eurovision sanado badan
Yaxaas Giriig ah oo lumay miisaanka
Maxaa la xidhiidha dharka diimeed?
Sida loo doorto kariyaha gaaska?
Ku dhaqida mashiinnada wado toos ah
Fasaxyada kaniisadaha ee Noofembar
Haweenta haweenka - waa maxay?
Guryaha laga bilaabo qoraalada
Sigaarka ku jira shandada foornada
Sneakers for miisaanka lumis
Dhir daawooyinka aan diida
Dhiig-xannuunka - daaweynta daaweynta dadka
Pasta leh digaag - cuntada ugu fiican ee saxanka caanka ah ee Talyaaniga
Magnitogorsk - beerta biyaha
Suuxdinta miskaha yar yar
Gogol-xaadhka gogol-galka ah ee ku yaala aqalka